Tansaaniya ayaa u diyaar garoobeysa kulanka UNWTO ee Afrika sanadka soo socda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Tansaaniya ayaa u diyaar garoobeysa kulanka UNWTO ee Afrika sanadka soo socda
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dr. Ndumbaro oo Tansaaniya ah iyo UNWTO Pololishkavili
Tansaaniya ayaa lagu wadaa inay martigeliso Guddiga Qaramada Midoobay ee Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ee Afrika bisha Oktoobar ee sannadka soo socda.
UNWTO waxay ku taageertay Tansaaniya inay tahay musharraxa iyo martigaliyaha kulanka 65-aad ee UNWTO ee Afrika 2022 ka dib markii qarankan Afrika uu muujiyey inuu diyaar u yahay martigelinta kulanka dalxiiska ee aadka u sarreeya.
Kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Caruusha oo ah magaalada dalxiiska ee waqooyiga Tanzania.
Ka -qaybgalayaashu waxay fursad u heli doonaan inay booqdaan furayaasha jardiinooyinka duurjoogta ah ee hormuudka ah iyo Buurta Kilimanjaro, marka laga reebo dhowr goobood oo dhaxal -dhaqameed oo aagga ku yaal.
UNWTO waxay ku taageertay Tansaaniya inay martigeliso kulanka inta lagu gudajiray shirarka wasiirrada ee lagu qabtay Namibia iyo Cape Verde bishii Juun iyo horraantii sannadkan oo wasiirrada dalxiiska Afrika ay isugu yimaadeen si ay uga wada hadlaan madal -galka dalxiiska ee qaaradda ee maalgashiga.
Xoghayaha guud ee UNWTO Mr. Zurab Pololikashvili ayaa aqbalay codsiga Tansaaniya martigeliyaha kulanka intii lagu gudajiray Shirweynihii Brand Africa oo ay soo qabanqaabisay UNWTO laguna qabtay Windhoek (Namibia) bishii Juun ee sannadkan.
Kulanka Brand Africa ayaa soo jiitay 15 Wasiir Dalxiis oo ka socda qaaraddan kuwaas oo isku raacay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa xal dib u soo nooleyn kara warshadihii dalxiiska ee qaaradda oo uu hadda si xun u saameeyay cudurka Coronavirus (COVID-19).
Wasiirradu waxay ballanqaadeen inay wada shaqeyn doonaan ka dibna ay dhisi doonaan sheeko cusub oo loogu talagalay madal horumarinta dalxiiska guud ahaan qaaradda Afrika.
Go'aanka taageera Tansaaniya musharraxa martigalinaya kulanka 65 -aad ee UNWTO ee kulanka Afrika sannadka soo socda ayaa lagu sameeyey shirkii 64 -aad ee UNWTO ee Afrika oo lagu qabtay Jasiiradda Sal ee Cape Verde toddobaadkii hore.
"Waxaan ka wada hadalnay kulanka 65 -aad ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) oo lagu qaban doono Tansaaniya kaas oo ummaddan gelin doona khariidada dalxiiska," ayuu yiri Wasiirka Dalxiiska Tansaaniya Dr. Damas Ndumbaro.
Kulanka la qorsheeyay sannadka soo socda ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan 54 wasiir dalxiis oo ka kala socda dhammaan dawladaha Afrika.
Wasiirka ayaa hogaaminayay wafdiga Tansaaniya kulankaas oo lagu doortay dalkan Afrika xubin ka ah Barnaamijka UNWTO iyo Guddiga Miisaaniyadda (PBC).
Dawladaha xubnaha ka ah Afrika ee UNWTO waxay ka wada shaqayn doonaan sidii loo samayn lahaa sheeko cusub oo loogu talagalay dalxiiska qaaradda oo dhan.
Si aad si fiican u ogaato awoodda dalxiiska ee dib-u-soo-kabashada, UNWTO iyo Xubnaheeda waxay sidoo kale la shaqeyn doonaan Midowga Afrika iyo waaxda gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado qaaradda dhagaystayaasha cusub ee adduunka iyada oo loo marayo sheeko wanaagsan oo dadka dhex-dhexaad ah iyo summad wax ku ool ah.
Iyada oo dalxiiska loo aqoonsaday tiir muhiim u ah horumar waara oo loo dhan yahay qaaradda, UNWTO ayaa ku soo dhaweysay wufuud heer sare ah Shirweynihii ugu horreeyay ee Gobolka ee Xoojinta Brand Africa oo lagu qabtay Namibia.
Shirka waxaa ka soo qaybgalay hoggaanka siyaasadeed ee dalka martida loo yahay ee Namibia, oo ay weheliyaan hoggaamiyeyaasha qaybaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo ka kala yimid qaaradda oo dhan.
Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili wuxuu soo dhoweeyay go'aanka guud ee ah in dib loo fikiro iyo sidoo kale in dib loo bilaabo dalxiiska.
"Goobaha Afrika waa in ay hormuud ka noqdaan dabbaaldegga iyo kor u qaadidda dhaqanka firfircoon ee qaaradda, tamarta dhallinyarada iyo ruuxa ganacsadaha, iyo caloosheeda hodanka ah," ayuu yidhi.